China API610 BB4 (RMD) mgbapụta emepụta na suppliers | damei kingmech mgbapụta
Nha: 4-10 sentimita
Ike: 100-580 m3 / h
Okpomọkụ: 0-210 Celsius C
1. Mmiri casing, orùrù casing, diffuser, na impeller: carbon ígwè nke chrome ígwè.
2. Shaft, eyi mgbanaka na diffuser ohia: chromic alum nchara nke chrome steel.
1. The nfuli bụ sectional casing, multi-ogbo centrifugal nfuli. Ihe nkedo ihe nkedo, ihe nkedo na ihe nkedo na ndi nkedo. A na-ejikọ njikọta dị n'etiti casing a site na kọntaktị metal-metal. Simultancously, o-yiri mgbaaka na-eji dị ka inyeaka akàrà.
2. The esorowo mbak na-eji maka mmiri, ogbo na-agbapụta n'ahụ casings nke ụdị MSHB mgbali esi mmiri ọkụ nfuli nfuli.
1. A na-emechi oghere nke nfuli ndị a site na mmiri dị nro na mmiri dị jụụ. Na mpaghara nke akara aka, a na-echedo mgbapụta mgbapụta site na aka imeghari ohuru.
Na-agba ọsọ na axial guzozie ngwaọrụ
2. A na-akwado nzukọ na-agbagharị agbagharị site na nkedo na-agba ọsọ na nsọtụ abụọ nke ihe mgbapụta ahụ. Biarin nke mgbapụta na-amanye-lubricated. Ejiri usoro mmanụ maka ụdị mgbapụta DG. Ihe axial siri ike nke rotor osis kwadoro site na itule diski. Ihe ntinye aka bu laso nke enyere ka o buru ike idi ike nke kpatara mgbanwe nke onodu oru.
1. The mgbapụta a na-anya site na moto site na njikọ. Enwere ike iji gia, njikọ akpụkpọ ahụ yana njikọta hydraulic dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. The mgbapụta nwere ike chụpụrụ site na tobaim nke moto.
2. Ntughari uzo nfuli na-emezi na klọọkụ mgbe elere ya n’ihu ịkwọ ụgbọala.
3. Pịnye MSH akwa nfuli ọkụ ọkụ na-enye nfuli mmiri ka a na-eji zụọ nnukwu mmiri ọkụ nke ịmị mmiri dị elu.
Ọtụtụ-eji na ụlọ ọrụ na mmiri suppy
Nke gara aga: API610 BB3 (AMD) mgbapụta
Osote: API610 BB5 (DRM) mgbapụta
API610 VS1 mgbapụta VTD Model
API610 OH1 mgbapụta FMD Model